करण केसीलाई सांसद डा. पाठकले हस्तान्तर गरे ५० हजार रुपैँया – News Portal of Global Nepali
करण केसीलाई सांसद डा. पाठकले हस्तान्तर गरे ५० हजार रुपैँया
आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग डिभिजन–२ अन्तर्गत नामिबियामा भएको खेलमा नेपाललाई जिताउन निर्णायक भुमिका खेलेका बागलुङका करण केसीलाई सम्मान गरिएको छ । बागलुङ नगरपालिका–८ सिगानामा जन्मेका केसीले उक्त खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै जिम्बाबेमा हुने विश्वकप क्रिकेट छनोट खेलमा नेपाललाई प्रवेश गराउन महत्वपुर्ण भुमिका खेलेका थिए । खेल क्षेत्रमा केसीले पु¥याएको योगदानको कदर गर्दै बागलुङ नगरपालिकाको कार्यालयले नगद ५० हजार रुपैँया सहित सम्मान पत्र प्रदान गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभाका सांसद डा.सुर्य पाठक, नगरपालिकाका मेयर जनकराज पौडेल, उपमेयर सुरेन्द्र खड्काले केसीलाई पचास हजार रुपैँयाको चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै केसीले आफु देशको लागि सधै इमान्दारीता, कडा मिहिनेत र लगनशीलताका साथ खेल्ने बताए । उनले निडर भएर खेल्दै जाँदा अन्तिममा जित भएको भन्दै आगामी दिनमा पनि क्रिकेट खेलको विकासमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिभावान खेलाडीहरु हुँदा हुदैँ पनि प्रोत्सानको कमीले गर्दा खेल क्षेत्रमा पछि परेको उनको भनाई छ । खेलमा नेपालले खराव सुरुवात गरेपनि अन्तिममा बिजय भएसंगै अहिले सर्वत्र प्रशंसा भइरहेकोमा खुशी समेत व्यक्त गरेका छन् । केसीले सबै समर्थकहरुलाई धन्यवाद दिदैँ क्रिकेटलाई सदैव माया र सद्भाव प्रकट गर्न आग्रह समेत गरे ।
सोही अवसरमा बागलुङ नगरपालिका–८, जिल्ला खेलकुद बिकास समिति बागलुङले पनि संयुक्त रूपमा सम्मान गरेका थिए । कार्यक्रममा मेयर जनक पौडेलले क्रिकेट खेल मार्फत देशलाई बिश्व कपमा प्रबेश गराउन सफल भएको भन्दै धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन बागलुङ नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत नारायण सापकोटाले गरेका थिए । खेलाडी केसीको सम्मान स्वरुप बागलुङ सदरमुकाममा बाजागाजा सहित नगर परिक्रमा पनि गरिएको थियो ।
तेस्तै केसीलाई क्षेत्री समाज बागलुङले पनि सम्मान गरेको छ । समाजका अध्यक्ष बाबुराज कार्कीले केसीलाई नगद १० हजार रुपैया सहित सम्मान पत्रले सम्मान गरेका हुन । कार्कीले समाजको तर्फबाट केसीको मनोवल उच्च बनाउँनको लागि र आगामी दिनमा पनि राम्रो खेल्नको लागि सम्मानले मनोवल बढाउने बताएका थिए ।